audio [wiki ifg]
Midira eto :
Writing /home/infogasy/domains/wiki.infogasy.net/public_html/data/cache/4/4565260de2203381f6d04c43d46b193d.xhtml failed
Feo lalany telo
Ny feo ao anaty solosaina
Ny feo dia zavatra ren’ny sofina noho ny fangovitan’ny rivotra izay samborin’ny ambongan-tsofina. Io fangovitana io dia vokatry ny fiparitahana onja avy amina loharanom-peo iray.
Ny onjam-peo, toy ny onja rehetra, dia afaka faritan’ny toetra vitsivitsy. Ny hafaingany moa miankina amin’ny tontolo ipariahany, 1235 km/ora eo anatin’ny rivotra)
ny hamafiny (amplitude): io ilay amboarina amin’ny “Volume”. Amin’ny fizika dia decibel (dB) no ventin-drefiny
ny hatetika (frequence): amin’ny feo indray dia ny haavony no feran’ny hatetika. Rehefa mitombo ny hatetika dia miakatra ny feo. Amin’ny mozika moa - mba mianara mozika izay farafahakeliny - misy fitaovana manome feo reference, diapason no anarany. La3 no naoty omeny, mifandray amin’ny hatetika 440Hz. Isaky ny miakatra octave iray dia mitombo avo roa heny io hatetika io.
ny endrik’ilay onja izay manome ny timbre. Io ohatra no tsy mampitovy ny feon’orga sy sodina.
Ny feo fandre matetika dia fifangaroana onja maro dia maro. Noho izany dia tsy asa moramora ny fikirakirana feo, izany no mahatonga ny fisian’ny atao hoe ijenieran’ny feo izay maty hanina manokana amin’izay.
Ny hatetik’ireo onja mamorona ny feo ren’ny sofin’olombelona dia 20 Hz ka hatramin’ny 20000 Hz eo ho eo. Ny sivana dia natao hamerana ny hamafin’ny onja arakaraka ny hatetiny ao anatin’ny fifangaroana onja maro.
Ny equalizer no fitaovana natao hanivanana feo. Boaty elektronika izy hatramin’izay, misy rindrankajy manao ny asany amin’izao fotoana izao. Ireo maty hanina moa samy manana ny safidiny. Ny equalizer dia misy bokotra maromaro toy ny bokotra “volume” izay mifandray amina hatetika iray avy.
Ho an’ny equalizer tsotra indrindra dia ahitana ny piste telo: feo ambany, feo afovoany, feo ambony. Ny equalizer sasany dia mety ahitana maromaro noho izay.
Ankoatra ny fanatsarana ny feo, ny equalizer koa indraindray ohatra dia afaka ampihenana ny kotaba (bruit) raha azoazo an-tsaina ny hatetika misy an’io kotaba io, na koa ampihenana ny feon’ny mpihira hahazoana feo hanaovana karaoke. Izay mahay azy mba atoroy
Rehefa mandray feo sy mandrindra (arrangement) dia fanao ny mampiasa canal maromaro. Sarahana canal araka izany ny karazam-peo: feo voalohany, feo faharoa, ..., orga, gitara, batery, sodina, ... sns. Izany dia mba ahafahana mikirakira an’ireo feo ireo tsirairay avy alohan’ny hanakambanana azy.
Ny fitaovana fanaovana izay dia ny table de mixage. Arakaraka an’ilay table no isan’ny canal azo ampiasaina. Ireo rindrankajy fikirakirana feo koa dia efa afaka anaovana an’izay.
Ireo canal be dia be amin’ny mixage ireo dia any amin’ny studio famokarana feo no misy azy. Fa ny feo fihaino dia hafa noho izay.
Voalohany aloha azo akambana ho canal iray ihany izy. Amin’izay ilay feo no atao hoe mono.
Ny siansa dia milaza fa ahafahana mahazo illusion-na espace ny fampiasana loharanom-peo roa. Mba hanakaikezana kokoa ny tena zava-misy amin’ireo feo vokarina, dia nampidirina ny atao hoe stereophony izay feo mizara anaty canal anankiroa. Ny olona mihaino mozika stereo izany dia tokony mahatsiaro ohatra ny hoe manatrika fampisehoana. Fa samy nanana ny nampiasany azy ireo canal roa ireo.
Mbola natao foana izay hahatsiarovana ho toy ny ao anatin’ilay feo rehefa mihaino azy. Nampidirina ny quadriphony, izay manome loharanom-peo efatra, nisy koa ny nihoatra an’izany. Ireo loharanom-peo ireo dia misy fomba fandaharana azy araka ny tokony ho izy vao azo ilay fandrenesana tadiavina.
Ny baffle na speaker no fitaovana famoahana feo. Misy contrainte teknika amin’ny fanamboarana azy ireny anefa ny hahafahana mahazo baffle mahasarona ny hateti-peo fandre rehetra. Noho izany dia nampidirina ny “three way speaker“, izany hoe nozaraina telo ny lalan’ny feo: ny feo ambany (midoboka) mankany amin’ny woofer, ny feo antenantenany amin’ny medium ary ny feo kely (mitsitsika) mankany amin’ny tweeter.
mono: feo canal tokana
2.0: feo canal roa, tsy misy woofer. (id stereo)
2.1: feo canal roa, miampy woofer mampidoboka ny bass
5.1: feo canal dimy, miampy woofer
Tahaka ny sary izay misy bitmap sy vectoriel koa ny feo, ahitana karazany roa:
ny feo fangaron’onja: ireo feo *.wav, *.mp3, *.ogg, sns ...
ny feo midi: ny fichier midi dia tsy mirakitra feo, fa famaritana momba ireo karazam-peo no ao anatiny: ny naoty, ny timbre, ny fotoana hanenoany sy ny faharetany sns isaky ny feo tsirairay. Noho izany koa ny fichier midi dia afaka sokafana amina rindrankajy fanaovana partition, ka afaka jerena ireo karazana naoty ireo amin’ny endrika tain-dalitra (solfege) na hafa.
Hanova hira amin'ny k7 ho lasa MP3
Rindrankajy fikirakirana feo
audio.txt · Novaina farany:: 2008/09/11 12:43